HomeTURKEYGobolka Central Anatolia68 AksarayAksaray Ulukışla Railway Line ayaa gaartay meeshii ugu dambeysay
09 / 01 / 2020 68 Aksaray, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Wadada tareenka ee Aksaray ulukisla ayaa gaartay meeshii ugu dambeysay
Head of taxane ah oo Ankara xilka Aksaray Badeecadda Exchange samaynta xiriirada muhiim Hamid Ozkok, Aksaray Ganacsiga iyo Gudoomiyaha Rugta Warshadaha Cuneyt Meteors, Madaxweynaha Golaha Exchange Badeecadda Aksaray Nurettin Yapılc Aksaray Rugta Madaxweynaha Golaha Ganacsiga Fatih Tekin horeysay Turkey Chambers iyo is-weydaarsiga Badeecadaha Association ( TOBB) Madaxweynaha M. Rifat wuxuu booqday Hisarcıklıoğl.
xarumaha bulshada TOBB wafdi ka socda shirka hall Aksaray marti Turkey Midowga Chambers iyo is-weydaarsiga Badeecadaha (TOBB) Madaxweynaha uga mahad celiyay qanacsanaanta Madaxweynaha ayaa muujiyay la booqashada M. Rifat Hisarcıklıoğlu ah.
Turkey Midowga Chambers iyo is-weydaarsiga Badeecadaha (TOBB) Madaxweynaha Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Trade Exchange ee January iyo lagu casuumay oo ay wada-madaxweyne ka dhigi doonaa barnaamijka Aksaray Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha. Madaxweyne Hisarcıklıoğlu wuxuu balanqaaday inuu kaqeyb qaadan doono barnaamijka. Kadib booqashadii waxay ku dhammaatay sawir xusuus leh.
Loogu Soo Baxay Wadada Tareenka Aksaray
Guddoomiyaha Isweydaarsiga Badeecadaha Aksaray Hamit Özkök iyo Madaxweynaha Aksaray Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Cüneyt Göktaş, Kaaliyaha Agaasimaha Guud ee Shirkadda Fikret Şinasi Kazancıoğlu iyo Ku Xigeenka Maareeyaha Guud ee TCDD iyo Guddiyada Xubnaha iyo Gaadiidka Kaabayaasha Xubnaha Wuxuu la kulmay Kuxigeenka Agaasimaha Guud ee Xeerka Tareenka ee Bilal Nailçı.
Kuxigeenka Maareeyaha Guud Fikret Şinasi Kazancıoğlu iyo Bilal Nailçı waxay bixiyeen macluumaad farsamo oo ku saabsan Aksaray - khadka tareenka Ulukışla.
Weftiga, oo sameeyey bayaan guud oo ku saleysan muhiimada maaddada iyo muuqaalka juqraafiyeed ee Aksaray, ayaa yidhi: "Ugu horeyntii, Akeng Aksaray kuxigeenka Cengiz Aydoğdu, oo ka mid ah qiyamka ay Aksaray soo kordhisay, ayaa dadaal weyn ugu jira wadada tareenka, si wax ku ool ah u adeegsada xafiisyada bilicda isla markaana hubiya in mashruuca tareenka uu gaaro heerkan." Aad baad u mahadsantahay. Waa magaalo qadiimi ah oo isku xirta waqooyiga ilaa koonfurta iyo bari ilaa galbeedka bartamaha Anatolia. Waxay noqotay xarun soo jiidasho leh maalgashadayaasha sababtoo ah meesha ay ku taal wadada İpekyolu, meesha ay ku taal istiraatiijiyadeed iyo joogitaanka gobolka 6aad ee nidaamka dhiirrigelinta Aksaray. Shirkado badan oo caalami ah ayaa magaaladeenna wax ka soo saara. Si kastaba ha noqotee, waxay ku adkaatay dhinaca rarka iyo saadka. Markii la bilaabay dhismaha wadada tareenka ee Aksaray Uluk thela, gaadiidkii alaabada dhoofinta ee laga soo saaray Aksaray dekeda Mersin Port ayaa ah mid dhaqaale ahaan soo jiidasho leh iyo duruufo badan oo faa iido u leh ganacsatada maalgashada Aksaray. Sidaa darteed, Aksaray ayaa noqon doonta magaalo soo jiidasho u leh maalgashadayaasha labadaba logistics iyo kalmado istiraatiiji ah.
Kuxigeenka Maareeyaha Guud ee TCDD ahna Kuxigeenka Guud ee Gudiga Qaanuunka Tareenka ee Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Bilal Nailçı waxay cadeeyeen in mashruuca khadka tareenka Ulukışla Aksaray uu dhamaaday 2018.
Farshaxanka ciddiyaha Aksaray ayaa siiyay macluumaadka ah in mashruuca khadka Konya Antalya la dhammeyn doono bisha Juun 2020 isla markaana la saari doono hindise. (Aqsarayhabers)
Aksaray si loo gaarsiiyo xeryaha tareenka ee Kırşehir-Ulukışla
Khadadka Tareenka Aksaray Ulukışla